TOP: Baarlamaanka Soomaaliya oo Go’aan Rasmi ah ka qaadanaya Ciidamada Kenya ee ku sugan somaliya – Kismaayo24 News Agency Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284
TOP: Baarlamaanka Soomaaliya oo Go’aan Rasmi ah ka qaadanaya Ciidamada Kenya ee ku sugan somaliya
by admin 14th November 2015 07
Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulan rasmi ah ka yeelanaya qaraar ay ka diyaariyeen dhul boobka dowlada Kenya ay ka waddo xuduuda ay wadaagaan dalalka Soomaaliya iyo Kenya.
Kulanka baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa looga doodayaa qaraar ay soo diyaariyeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo laga soo kala xulay gudiga arimaha dibada iyo gudaha ee baarlamaanka Soomaaliya.
Xubnaha baarlamaanka ayaa maanta eegaya qaraar ay soo diyaariyeen wakiilo laga soo xuray xubnaha barlamaanka Soomaaliya, kuwaasi oo yimid markii kulan ay yeesheen gudiyada arimaha dibada iyo amniga gudaha ee baarlamaanka.
Xildhibaan Maxamed Cumar oo kamid ah xubnaha baarlamaanka ayaa sheegay in kulanka maanta la filayo in qaraar rasmi ah ay kasoo saaraan xildhibaanada baarlamaanka oo ay kaga hadlayaan boobka Kenya ka waddo dhulka dhanka xuduuda ku yaala.
Dowlada Kenya ayaa la sheegayaa iney gudaha Soomaaliya dhanka dhulka usoo gashay ku dhawaad seddex kiilomitir, waxaana taasi ay dhalisay in xubnaha baarlamaanka ay kulamo deg deg ah ka yeeshaan.
Waxaa la sugayaa go’aanka maanta xildhibaanada baarlaamaanka ka qaataan qaraarka ays oo diyaariyeen.
abdi kafi abdi abdulle
SAWIRO: Xaalad Deg deg ah oo Faransiiska lagu soo rogay & Tirada Dhimashada oo korortay
Axmed Madoobe oo sheegay inay gudi xaqiiiqo raadin ah u dirayaan darbiga laga dhisayo xaduuda somaliya iyo kenya
Daawo Madaxweyne Xassan oo ku dhaqaaqay arin ay shacabka Muqdisho so dhaweyeen.
admin 19th May 2014 28th August 2015
War hada: Diyaarad ku Bur burtay Wadanka Colombia taasi oo ay saarnaayeen Koox kubada cagta ciyaarta oo ka dhisan Wadanka…..+Sawirro
Tifaftiraha K24 29th November 2016 29th November 2016
Wafdi ka socda Aminsom iyo SNA oo garay Cadaado iyo Gadiid dagaal oo ay geeyeen
admin 9th September 2016